Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4.1.1 Tagaasida ee New York City
Cilmi-A isticmaalo xogta weyn ka mitir taxi inaad wax ka barato go'aan-qaadasho ah darawallada taxi ee New York. Xogtan ayaa waxaa sidoo kale ku haboon cilmi this.
Mid ka mid ah tusaale ahaan xoogga fudud ee tirinta wax sax ah ka timaada Henry Farber ee (2015) daraasadda of dhaqanka ee darawallada taxi City New York. Inkastoo kooxdan laga yaabaa in aan ka dhawaajin muuqo oo xiiso leh waa goob istiraatiiji u ah cilmi jirrabaya laba aragtiyood oo ku tartamaya in dhaqaalaha shaqada. Waayo, ujeedooyinka cilmi Farber ee, waxaa jira laba Tilmaamo muhiim ah oo ku saabsan deegaanka shaqada ee darawallada taxi ah: 1) in ay mushaar saacadle bedbeddeso maalin-ka-maalin, ku salaysan ee ka qayb on arrimo sida cimilada iyo 2) tirada saacadaha ay shaqeeyaan bedbeddeli-karaan maalin kasta ku saleysan go'aamada darawalka ee. Astaamahani waa keeni su'aashan xiiso leh oo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya mushaharrada iyo saacadaha la shaqeeyo. daydo Neoclassical in dhaqaalaha la saadaaliyo in darawallada taxi shaqayn lahaa dheeraad ah oo ku maalmood halkaas oo ay ku leeyihiin mushahar saacadeed sare. Haddii kale, lagu daydo ka dhaqaalaha habdhaqanka saadaaliyo dhab ahaan kasoo horjeeda. Haddii darawaliinta dhigay dakhli gaar ah diirada u-dhihi $ 100 halkii maalin-oo shaqada ilaa diirada la kulmay, ka dibna wadayaasha dhamaan doono ilaa shaqeeya saacado yar on maalmood in ay ku muteystay ka badan. Tusaale ahaan, haddii aad mushaarka badan bartilmaameed u ah, aad ka soo afjaro oo laga yaabo shaqeeya 4 saacadood on maalin wanaagsan ($ 25 saacadii) iyo 5 saacadood maalintii xun ah ($ 20 saacadii). Sidaas, ha wadayaasha shaqeeyaan saacado dheeraad ah maalmaha mushahaaradiinnana sare saacaddiiba (sida saadaaliyay by ugu daydo neoclassical) ama saacadood ka badan maalmaha la mushaharka saacaddii hoose (sida saadaaliyay by daydo dhaqaale habdhaqanka)?
Si aad ka jawaabto su'aashan Farber xogta helay safar taxi oo kasta, by cabs City New York ka 2009 - 2013, xogta in hadda jira si cad u heli karo . data-oo waxaa la soo ururiyey by mitir elektaroonik ah in magaalada ay u baahan tahay tagaasida in ay isticmaalaan-ka mid ah dhawr xabbadood oo macluumaadka safarka kasta: bilaabaan waqti, bilaabaan goobta, dhammaadka wakhtiga, goobta dhamaadka, qiimaha, iyo caarada (haddii caaradda lagu bixiyey la credit card). Guud ahaan, xogta Farber ee ku jira macluumaad ku saabsan ku dhowaad 900 milyan oo safarada qaaday ku dhowaad 40 milyan oo gelinba (wareeg ah qiyaastii waa hal maalin shaqo darawalka mid ka mid ah). Dhab ahaantii, waxaa jiray xog aad u badan, in Farber kaliya loo isticmaalo muunad random waxaa ka mid ah ee uu falanqayn. Isticmaalka xogta this meter taxi, Farber ogaaday in darawallada ugu shaqayn dheeraad ah oo ku saabsan maalmaha mushaharka sarreeya, oo waafaqsan aragtida ah neoclassical. Waxa intaa dheer in natiijada ugu weyn ee this, Farber ahaa awoodaan in ay uga faa'iidaysato size ee xogta u faham wanaagsan ee heterogeneity iyo dhaqdhaqaaqa. Farber ogaaday in muddo darawallada cusub tartiib ah u bartaan inay shaqeeyaan saacado dheeraad ah maalmaha mushaharka sare (tusaale ahaan, waxay bartaan inay u dhaqmaan sida lagu daydo neoclassical saadaaliyay). Oo, darawallada cusub kuwaasoo u dhaqma sida mushaarka badan bartilmaameed u badan tahay inuu ka tago isagoo darawal tagsi. Labada ka mid ah natiijooyinka ugu khiyaano, taas oo ka caawin sharxi dhaqanka dhawraan wadayaasha hadda, suurtowdo oo kaliya sababtoo ah size ee dataset ah. Waxa ay lahayd wax aan macquul aheyn in la ogaado in cilmiga hore in loo isticmaalo shabaqa safar warqad ka tiro yar oo ah darawallada taxi muddo gaaban (tusaale, Camerer et al. (1997) ).
waxbarasho Farber ahaa ayaa ku dhow inay la-kiiska ugu fiican ee waxbarasho oo isticmaalaya xogta weyn. First, xogta ma ay ahayn wakiilka sababtoo ah magaalada looga baahan yahay wadayaasha si ay u isticmaalaan mitir digital. Oo, xogta ay yihiin kuwo aan dhamaystirnayn, sababtoo ah macluumaadka la ururiyey by magaaladii jidkeediina wuxuu ahaa quruxsan ku dhow inay xogta in Farber soo ururiyay lahaa haddii uu lahaa doorasho (mid kala duwan yihiin waa in Farber leeyihiin lahaa xogta doonayay on wadarta mushaharka-lagu raaco oo lagu daray tips- laakiin xogta magaalada ka mid ah oo kaliya talooyin ay bixisay credit card). Furaha cilmi Farber ayaa isku su'aal wanaagsan la xogta wanaagsan. Xogta oo keliya aysan ku filneyn.